मुला : क्यान्सरको जोखिम घटाउनुका साथै पायल्सका लागि अचुक औषधि – NepalDailyPost
नेपाल डेली पोस्ट २०७६, २८ श्रावण मंगलवार १५:५३
एजेन्सी, काठमाडौं। मुला भान्सामा सजिलै उपलब्ध हुने तरकारी हो  तर यसमा अचसक औषधीय गुण हुन्छ ।मुलाले क्यान्सरको जोखिम घटाउने काम गर्छ । मुलामा प्रशस्त मात्रामा पाइने एन्टिअक्सिडेन्टले शरीरका कोषको डिएनए नष्ट हुनबाट बचाउँछ । साथै, नियमित मुला सेवन गर्दा पेट र आन्द्रामा हुने क्यान्सरको जोखिम कम हुन्छ ।
PREVIOUS Previous post: सन्दीप लामिछानेलाई भिषा रिजेक्ट गरेको ३ घण्टामा नै भिषा दियो अमेरिकाले
NEXT Next post: चाड पर्व : लाखेको रौनक शुरु भइसक्दा पनि बागलुङमा भने नाच्ने मान्छे नै पाइएन!
भोलि १० बजेपछि रबि लामिछाने छुट्दै ! वकिलले भने ‘गल्ति सालिकरामकै छ’ 3,718 views